Ukupakishwa kwelebheli yabucala kuya kuba yinto eqhelekileyo kwezi ntsuku, ukusuka kwinkampani enkulu ukuya kwishishini elincinci, bonke bafuna ukuzenzela igama ngokwenkampani ngokupakisha kwayo. Njengoko ukupakisha kuyindlela elula, engabizi kwaye isasazeka ngokukhawuleza ukufezekisa injongo. Namhlanje, njengeminyaka eli-10 yamava ephepha p ...
I-Eco-friendly ngoku iba yinto, abantu abaninzi bayayikhathalela imihla ngemihla, njengoko sijamelene nokuphakamisa iintlekele ezibangelwe kukutshatyalaliswa kwendalo ngokwethu. Kithi, njengomvelisi webhokisi yokupakisha, ihlala ibuzwa, ukuba ibhokisi yakho iyabola? Kuqala, masifumanise ukuba yintoni i-biodegrada ...
Ukupakisha kukhona njengokukhusela imveliso yangaphakathi, nangona kunjalo, ngophuhliso loqoqosho lwehlabathi, ukupakisha kufuneka kongeze ixabiso elongezelelekileyo. Ukuma kwindawo yabathengi yanamhlanje, kuya kufuneka ufikelele kwi "wow factor", eyenza uyilo lokupakisha lubaluleke kakhulu. Kodwa uyila njani ...